ဆေးရုံအားလေ့လာရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးရုံ ဝေ့ဋ္ဌာနီ၏ သိကောင်းစရာ အကျဉ်း ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ISO 9001:2000 အသိမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် Thailand Hospital Accreditation (HA) ခေါ် ထိုင်းနိုင်ငံဆေးရုံများဆိုင်ရာ အရည်ချင်းပြည့်မီခြင်း အသိမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Joint Commission International (JCI) ခေါ် နိုင်ငံတကာ ပူးတွဲကော်မရှင်အဖွဲ့မှ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ISO 14001:2004 နှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ထိပ်တန်းအရည်အသွေးနှင့် စံချိန်မြင့်မားမှုအတွက် Prime Minister’s Award ခေါ် ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဆုတံဆိပ် တို့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ရည်မှန်းချက်
လူ့ဖွဲ့စည်း၏ ပြောင်းလဲလျက်ရှိသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို အရည်အသွေးမြင့်မားစွာ၊ တီထွင်ဆန်းသစ်စွာ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအားဖြင့် ရှေ့ ဆောင် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု ထောက်ပံ့ပေးသူများ ဖြစ်စေရန် လုပ်ဆောင်ချက် လူသားတစ်ဦး၏ လိုအပ်ချက်ကို အစဉ်လေးစားလျက် အကောင်းမွန်ဆုံးသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဖြင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပလူနာများကို ၀န်ဆောင်မှုပေးရန် ရရှိနိုင်သော ၀န်ဆောင်မှုများ ကုတင် ၅၀၀ ၁၂ ထပ်မြင့်အဆောက်အဦး ၃၄,၉၆၄ မီတာအကျယ် လူဦးရေ ၅၀-၈၀ ဆန့် အစည်းဝေးခန်းမ အစီး ၅၀၀ ဆန့် ယာဉ်ရပ်နားဆောင် ခေါင်မိုးဥယျာဉ် စားသောက်ဆိုင်နှင့် ကော်ဖီဆိုင်များ ထိုင်းရိုးရာအနှိပ်ခန်း အလိုလျှောက် ငွေထုတ်စက်များ စာအုပ်နှင့် အရုပ်ရောင်းဆိုင်များ လူနာဦးရေပေါင်း နှစ်စဉ် အတွင်းလူနာ ၃၀,၀၀၀ ကျော် နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်မှ နိုင်ငံခြားသားလူနာများ လူ့စွမ်းအားအရင်းမြစ် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း ၇၀၀ ကျော် ဆရာဝန်များနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ ဦးဆောင်သော နိုင်ငံတကာရေးရာ စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ ဆရာဝန်ကြီးများနှင့် သွားဆရာဝန်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော် သူနာပြုဦးရေ ၂၀၀ ကျော် အတွင်းလူနာဌာန
အတွင်းလူနာကုတင်ပေါင်း ၅၀၀ လူကြီး အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် ကျောက်ကပ်ဆေးစင်တာ ကလေး အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် Grand Wing အတွင်းလူနာဆောင် အာရပ်အတွင်းလူနာဆောင် ကလေး အတွင်းလူနာဆောင် တစ်ယောက်နေ အထူးခန်း ၉၅ ခန်း၊ အထူးခန်း ၁၀ ခန်း၊ ဗွီအိုင်ပီခန်း ၁၁ ခန်း 95 Grand Single rooms, 10 Suites and 11 VIP Suites
ပြင်ပလူနာများ ၀န်ဆောင်မှု ၂၄ နာရီ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အရေးပေါ်ကားနှင့် အထူးကြပ်မတ်ကုသယာဉ် ပြင်ပလူနာ အထူးကုဋ္ဌာနပေါင်း ၇၀ ကျော် နေ့စဉ်အတွင်းလူနာပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော် ပြင်ပလူနာများ ခွဲစိတ်ကုသမှုဌာန ပြင်ပလူနာ အထူးကုဌာနများ ဓာတ်မတည့်ခြင်းဆိုင်ရာ အထူးကုဌာန ရင်သား အထူးကုဌာန နှလုံးအထူးကုဌာန အူလမ်းကြောင်း ခွဲစိတ်မှု အထူးကုဌာန ကျောက်ကပ်ဆေးစင်တာ နား၊ နှာခေါင်းနှင့် လည်ချောင်း အထူးကုဌာန အရေးပေါ်ကျန်းမာရေး အထူးကုဌာန သွေးချို၊ဆီးချိုနှင့် အတွင်းစိမ့်ဂလင်းများ အထူးကုဌာန အထွေထွေကျန်းမာရေး ဆေးစစ်ခြင်းဌာန မျက်လုံး အထူးကုဌာန အစာအိမ်၊အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်း အထူးကုဌာန အထွေထွေ ခွဲစိတ်ကုသမှုဌာန လက် အထူးကုဌာန သွေး အထူးကုဌာန အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး အထူးကုဌာန ကူးစက်ရောဂါ အထူးကုဌာန သွား အထူးကုဌာန အထွေထွေရောဂါကုဌာန ဓာတ်ခွဲခန်း ကျောက်ကပ် အထူးကုဌာန ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြော အထူးကုဌာန ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြော ခွဲစိတ်မှုဌာန မီးယပ်နှင့်သားဖွား ဌာန အရိုး အထူးကုဌာန ကလေး အထူးကုဌာန ကလေး ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ အထူးကုဌာန ရုပ်ပြင်ခွဲစိတ် အထူးကုဋ္ဌာန Plastic Surgery Clinic စိတ်ရောဂါ အထူးကုဌာန ဓာတ်မှန်ဌာန ကိုယ်ကာယ ပြန်လည်သန်စွမ်းရေး အထူးကုဌာန အဆုပ်နှင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း အထူးကုဌာန လေးဘက်နာ အထူးကုဌာန အရေပြားလေဆာနှင့် အလှပြုပြင်ခြင်း အထူးကုဌာန ကျောရိုး အထူးကုဌာန ဟောက်ခြင်း အထူးကုဌာန ရင်ခေါင်းခွဲစိတ် အထူးကုဌာန သန္ဓေသားဖန်တီရေး နည်းပညာဌာန အရိုးအဆစ် အစားထိုးကုသမှုဌာန ဆီးလမ်းကြောင်း ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာ အထူးကုဌာန အထူးဌာနများ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ဓာတ်ခွဲခန်း ခွဲစိတ်ခန်းမကြီး ၁၀ ခန်း ဓာတ်မှန်ဋ္ဌာန (X-Ray, CT scan and C-ARM)
မွေးကင်းစကလေးများ အထူးကြပ်မှတ်ကုသဆောင် Water-jet နည်းပညာဖြင့် အဆီထုတ်ခြင်း ကွန်ပြူတာနည်းပညာဖြင့် အရိုးအဆစ် အစားထိုး ခွဲစိတ်ကုသခြင်း အထူးကျွမ်းကျင်မှု့များ အရိုးအဆစ်များ အစားထိုး ခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ အလှပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ခြင်း၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာ ကုသမှုများ၊ အရေပြားနှင့် လေဆာကုသမှုများ၊ ကျောရိုးခွဲစိတ်ကုသမှုများ၊ လက်နှင့်ပခုံး ခွဲစိတ်ကုသမှုများ၊ အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်း ရောဂါများ၊ သန္ဓေသားဖန်တီးခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ၊ ၀မ်းဗိုက်ဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ကုသမှုများ၊ အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ကုသမှုများ၊ မီးယပ်နှင့်သားဖွားကုသမှုများ၊ နှင့် အထွေထွေကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်း။ နိုင်ငံခြားသားများအတွက် အထူးဝန်ဆောင်မှု့များ နိုင်ငံခြားသားလူနာများ ၀န်ဆောင်မှုဋ္ဌာန၊ Arabic လူမျိုးများ ၀န်ဆောင်မှုဋ္ဌာန၊ အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန်၊ အာရပ်၊ ဂျာမန်၊ ဘင်္ဂလား၊ မြန်မာ၊ ရုရှား၊ အီသီယိုးပီးယား အစရှိသောစကားပြန်များ၊ လေဆိပ်အကြိုပို့၊ အီးမေးဖြင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ ကျန်းမာရေး အာမခံကုမ္ပဏီများဖြင့် ပူးတွဲဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ဟာလာဟင်းအပါဝင် နိုင်ငံတကာ အစားသောက်အမျိုးမျိုး၊ ဘုရားဝတ်ပြုခန်းများ၊ တည်းခိုခန်း၊ တည်းခိုအိမ် ၀န်ဆောင်မှုများ နှင့် ဈေးဝယ် အပျော်တမ်း ခရီးများ စီစဉ်ပေးခြင်း ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူများရွေးချယ်မှု Thailand Consumers Choice (ခေါ်) “ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူများ ရွေးချယ်မှု” ဆုတံဆိပ်သည် လူသိများသော အမှတ်တံဆိပ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့်လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ် အတွက်ကိုမဆို ၄င်းတို့၏အောင်မြင်မှုကို အသိအမှတ်ပြု တိုင်းတာပေးသော ဆုတံဆိပ်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤဆုတံဆိပ်ရရှိပြီးသော လုပ်ငန်းရှင်များအပေါ် စိတ်ချယုံကြည် ထားနိုင်ပါသည်။ Asian Integrated Media Co. Ltd ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် လွပ်လပ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၏ သုတေသနပြုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဤဆုတံဆိပ်ကို ချီးမြှောက်ခွင့်ရပါသည်။ ၀န်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူ ရွေးချယ်မှုဆုတံဆိပ်သည် ယခုအခါ အာရှပစိဖိတ်ဒေသနှင့် ဥရောပတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ အသိအမှတ်ပြု လက်ခံလာကြပြီဖြစ်ပါသည်။ ဝေ့ဌာနီဆေးရုံသည်လည်း ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း အရည်အသွေးအတွက် ၀န်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူများ ရွေးချယ်မှုဆုတံဆိပ်ကို ချီးမြှောက်ခံထားရပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် လူနာပြုစုစောင့်ရှောက်မှု အရည်အသွေးတို့အပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်အ၀ ထားရှိနိုင်ပါသည်။
ဝေ့ဌာနီ၏ ၀န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်လျှင်း၍ မေးခွန်းများ၊ ဝေဖန်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ဆေးရုံမှ ကြိုဆိုပါသည်။
အောက်ဖေါ်ပြပါ အီးမေးလ်လိပ်စာအတိုင်း ကျေးဇူးပြုပြီး ဆက်သွယ်ပါ။
1 Ladprao Road 111, Klong-Chan Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand.
Myanmar hotline : +66 81-984-5111
if you have suggestions as to our range of Service
please visit our Wishbox and submit your suggestions. 2017 © Vejthani Hospital : 1 Ladprao Road 111, Klong-Chan Bangkapi,Bangkok,Thailand 10240 -- Choose your language --
Download Burmese Fontု့ပင်မစာမျက်နှာ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာဝန်များ ဆေးကုသဌာနများ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း	လူနာများရဲ့စကားသံ
ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးရန် ဆက်သွယ်ရန်နှင့် တည်နေရာ
ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးရန်	Make Appointment